मास्को - देश को विश्वविद्यालय राजधानी हो। यहाँ हामी विभिन्न प्रकारका (विश्वविद्यालय संस्थानहरुमा), अभिमुखीकरण र स्वामित्व (सार्वजनिक र निजी) को फारम को विश्वविद्यालयहरु को 169 विद्यार्थी लिन इच्छुक छन्।
भविष्यमा अध्ययन गर्न एक ठाउँ पत्ता मास्को मा सबै विश्वविद्यालयहरु समावेश जो सालाना अद्यावधिक निर्देशिका को एक अध्ययन, सुरु गर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई उच्च विद्यालय विस्तृत विश्लेषण विषय को संकीर्ण बैंड चयन गर्न सम्भव छ।
म जब एक मास्को विश्वविद्यालय छान्ने लागि के हेर्नुपर्छ?
- आफ्नो लाइसेन्स को उपस्थिति मा शैक्षिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न। यो मात्र यसको अस्तित्व कब्जा तर पनि आफ्नो चुनिएको विशेषता वा प्रशिक्षण को क्षेत्र वास्तवमा कानुनी रूपमा विश्वविद्यालय अनुसार बुझे निश्चित गर्न मा annexes हेर्न महत्त्वपूर्ण छ।
- मात्र शिक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक यो प्रक्रिया पारित गरेको छ किनभने राज्य accreditation को प्रमाणपत्र को उपस्थिति, एक राज्य उपाधि जारी छ। तपाईं चुनिएको विशेषता वा आधिकारिक सूचीमा प्रशिक्षण को क्षेत्र पाउन सक्नुहुन्छ भने, यो पहिलो संस्करण उच्च विद्यालय को कमी मतलब हुन सक्छ वा मुद्दाहरू थिए भने, accreditation को अभाव। पहिलो विकल्प कानुनी रूपमा सबै र भविष्यमा तपाईं एक राज्य उपाधि प्राप्त हुनेछ डर गर्न आवश्यक छैन भन्ने हो। दोस्रो - विश्वविद्यालय शैक्षिक संगठनका लागि राज्य आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन भन्ने होइन र यो गर्न हुँदैन राम्रो छ।
- यो ध्यानपूर्वक चयन विश्वविद्यालय आधिकारिक वेबसाइट पढ्न महत्त्वपूर्ण छ। अनुसार "शिक्षा मा" संघीय व्यवस्था संग सबै विश्वविद्यालयहरु सामाग्री र प्राविधिक आधार, काम गर्ने व्यक्ति, पुस्तकालय संसाधनहरू बारेमा जानकारी पोस्ट गर्न आवश्यक छ। यो विद्यार्थीहरूको व्यावहारिक प्रशिक्षण लागि अनुबंध गम्भीर संगठन हासिल प्रविष्टि कि, आफ्नो विशेषता, प्रयोगशाला आवश्यक लाइसेन्स प्रशिक्षण कार्यक्रम छ कि छैन थाहा उपयोगी छ, वैज्ञानिक डिग्री संग मान्छे को प्रतिशत के छ र जो आफ्नो चुनिएको पेशा वा अध्ययन क्षेत्र बाहिर दिँदै छ विभाग, मा रैंकों। त्यहाँ एक निजी पुस्तकालय छ, विश्वविद्यालय निष्कर्षमा कि संग इलेक्ट्रॉन-लाइब्रेरी प्रणाली, आदि एक सहयोग सम्झौता
विद्यार्थी जीवन देखि - यो मात्र होइन सिक्ने छ, तर पनि एउटा रोचक extracurricular जीवन, यो उपयोगी त्यहाँ एक उच्च विद्यालय Studklub उहाँले जो सर्कल र खण्डहरू समावेश लागि, प्रसिद्ध छ भन्दा छ कि छैन भनेर सोध्न छ।
क्षेत्रहरु आवश्यक उपस्थिति वा छात्रावास को अभाव, यसको रसिद को अवस्था, भुक्तान को राशि, शैक्षिक भवनहरु को सम्बन्ध मा यसको स्थान देखि मास्को विश्वविद्यालयहरु आउन गर्नेहरूलाई विद्यार्थीहरूको लागि।
त्यसपछि मात्र, ओपन दिन भ्रमण गर्न शिक्षक, विद्यार्थी र स्नातक संग कुराकानी र मास्को विश्वविद्यालय को अन्तिम चयन निश्चित हुनुहोस्।
CV जोइन्टहरूमा - यो भाग के हो? र यसले कसरी काम गर्छ?
मानव संसाधन व्यवस्थापन (विशेषता)। मानव संसाधन: प्रशिक्षण
म सुखी जीवन को लागि एक उच्च शिक्षा छ?
भविष्यमा विशेषज्ञहरु को प्रशिक्षण मा कोर्स काम
पायलट अध्ययन - यो के हो? कुन उद्देश्यका लागि पाइलट अध्ययन छ?
अभ्यास - आफ्नो भविष्य क्यारियर बाटो छ
मनोविज्ञान मा अवलोकन। मनोविज्ञान मा अवलोकन को प्रकार
"शारीरिक फ्लेक्स": समीक्षा, पहिले र पछि फोटो। वजन लागि सास अभ्यास
उत्साह - अगाडी बढ्दै छ
कोमी-पर्म स्वायत्त जिल्ला: Kudymkar र आकर्षण शहर
सशुल्क सदस्यता YouTube: मिथक वा वास्तविकता?
गरेको ZMZ 402 को फाइदा र बेफाइदा बारेमा कुरा गरौं
कुनै पनि नव आगन्तुक र सजिलै - घर मा आइसक्रिम तयार!
आफ्नो कम्प्युटर मा "एक्सप्लोरर" के हो र कहाँ छ?
प्रकार र उद्देश्य: प्लेटफर्म सन्तुलित
किन पाइन लाभ्रेकीरालाई मा नस्ल? कसरी किरा सामना गर्न?
कसरी ओखर रूख आफ्नो हात बाट बनाउन